ကျနော်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတဲ့ပြည်သူ့ရဲပါ ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကျနော်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတဲ့ပြည်သူ့ရဲပါ ………
Posted by fatty on Dec 7, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle | 28 comments
အဲလိုပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများကို ကျနော်ဖက်တီးမှ အလေးပြုပါသည်ခင်ဗျား။
မြန်မာပြည်ကြီး ပြောင်းလဲသွားပါပြီ ဟု သာ။(^^)
မြင်လဲမြင်တတ်တယ်ဗျာ တကယ်ပါဘဲ(ယိုသူမရှက်မြင်သူရှက်) ဆိုတာဒါမျိုးလား :grin:
အဲဒီ့ရဲက “ဂထစ” အဖွဲ့ ဝင် သီးသန့် ပါ
ကိုဖက် အဲဒါဘယ်နား ကတွေ့လာတာလဲ…။ ခင်ဗျားနော် ခင်ဗျားကြီးတော်တော်နောက်…။ အဲဒိကောင်များသိရင်တော့ …တော်တော် ဒေါခီးသွားမှာဗျ သိလား ? မလုပ်ပါနဲ့ဗျ…။ မနောက်စကောင်းနောက်စကောင်း (ကိုပေါက် ဆီက ခဏ ငှား သုံးလိုက်သည်…။ ပြီးရင်တော့ မေ့ချင်ယောင်ပြီး ပြန်မပေးပဲထားလိုက်ဦးမယ်)
ဘုရားစူးရစေရဲ့ ကျနော်မျိုး ရိုက်တဲ့ပုံမဟုတ်ရပါဘူး …..။
ဦးဖက်ရိုက်တာထင်လို့ သတ္တိကောင်းလှချည်လားလို့ ချီးကျူးမလို့။
ခုတော့ ချီးကျူးတာတောင် မစောင့်တော့ပဲ ထွက်ပြေးပြီလားးးးး
ခါးတွေ ဖမ်းရင်း စစ်ရင်း အကျင့်ပါသွားလို့ပါ ခွင့်လွတ်ပါ
ရဲ ဆိုတာ မကောင်းတာ မဟုတ်တာ အလုပ်များတဲ့သူ ဆိုတဲ့ အမြင်ကိုဘေးခဏဖယ်ထားပြီး တခြားအမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော် တွေးမိလိုက်ပါတယ်.. သူလည်း သက်ရှိလူသားတစ်ဦးမို့ ဆာလောင်မှုရှိမှာပါဘဲ၊ သွားရင်း လာရင်း ဆာလာတဲ့ အခါ စားရအောင်လို့ ဆောင်ထားတယ်လို့ တော့ထင်ပါတယ်.. ရရှိတဲ့လခလေးနဲ့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို ဦးစားပေးနေရတဲ့သူ၊ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကျောင်းတက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေ၊ အကယ်၍ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးဟာလည်း နာမကျန်းဖြစ်နေ၊ တာဝန်ကျရာနေရာကို ထမင်းချိုင့်ကြီးတကားကားနဲ့ သွားဖို့ လည်း မသင့်တော်ပြန်၊ နေ့ တိုင်းသာ ထမင်းဆိုင်မှာ ဝယ်စားနေရလို့ ရှိရင်လည်း အိမ်က မိသားစု ဗိုက်မှောက်နေရုံဘဲရှိတော့မယ်.. ဖြစ်စေချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်က ဝန်ထမ်းတွေကို လုံလောက်တဲ့ လစာပေးသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်း(ဒီမလေးရှားမှာ အလုပ် စ ဝင်ဝင်ချင်း ရဲသားရိုးရိုးတစ်ယောက်ရဲ့ လစာ+ထောက်ပံ့ကြေးက ရင်းဂစ် ၂၈၀၀ မြန်မာငွေ ၆၈၆၀၀ ရပါတယ်)
အပေါ်က ပုံကို ကြည့်ပြီး သနားစရာ မြန်မာပြည်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လို့ ဘဲ ထင်မြင်ခံစားမိပါတယ်
ကိုငြိမ်းချမ်းရဲ့ အမြင် ကိုလေးစားပါတယ်။
Thumb up! Ko Nyein Chan ! I also have same point of view!
ကိုငြိမ်းချမ်း ၊ ၆၈၆,၀၀ဝ ?
လက်ထိပ်ကလည်းပေါင်ပြီး ညက မူးမူးနဲ့ ရေချိန်မြှင့်လိုက်တယ် မနက်ကလည်းမိန်းမနဲ့အဆင်မပြေလို့ ကလေးမီးဖုတ်ကျွေးမယ့် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံး လက်ထိပ်အိပ်ထဲထည့်လာခဲ့တယ် အခု 2pm မှ အချဉ် လေးဖမ်းမိလို့ ထမင်းလေးလွေးပါတယ် တောက်—- ဖက်တီးဘယ်ချောင်ကနေ ငါ့ကို တီးသွားပြန် ပြီလဲ စိတ်ညစ်တယ် ဒီနေ့ပြဿဒါးနေ့ပဲ
ဌက်ပျော်သီးလေး ခါးကြားထိုးမိပါတယ်…ဦးဖက်နဲ့တိုးလို့ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်ရပါတယ်…
စည်ပင်ရဲကြီးခင်မျှာ သနားပါတယ် မောမောပန်းပန်းနဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်လိုက်ဖမ်းပြီးရင်စားဖို့ပါကွယ်…
လူဆိုးဖမ်းလို့အရေးကြုံရင် ဟိတ်ကောင်မလှုပ်နဲ့ ကွ ဆိုပြီး ခါးကြားက ဟန်ပါပါနဲ့ ဆွဲထုတ်လိုက်ရင် ထွက်လာမှာက သေနတ်မဟုတ်ပဲ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးကြီး ဟီးဟီးးး
ဒီပုံကို စမြင်မြင် ချင်း ထရယ်မိတယ်။
ဘယ်ကနေ ကောက်ထည့်လာပြီး ထားစရာနေရာမရှိလို့ အလွယ်လုပ်ထားတုန်းမှာ
မြန်မာပြည်က ရဲသားလည်း ၄၅,၀၀၀ကျပ် လစာ ရပါတယ်။
ပြဿနာက မြန်မာပြည်မှာ အလကားနေရင်း အထွေထွေ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်နေတာပါ။
ရဲ အကြောင်း အသိဆုံးဖြစ်မယ့် ကိုဖက်က ရေးမလားလို့စောင့်ပါတယ်။
ကိုဖက်မရေးလို့ ကျွန်တော်နဲနဲလောက် အစထောင်လိုက်ပါဦးမယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါကိုဖက်ရေ။
မုန်းစရာအလွန်ကောင်းပြီး သနားစရာလဲအလွန်ကောင်းတာ မြန်မာပြည် ရဲ ၀န်ထမ်းတွေပါ။
သူများတွေကိုကာကွယ်ပေးရပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ အကာအကွယ်မဲ့နေတာ မြန်မာပြည် ရဲ ၀န်ထမ်းတွေပါ။
လူဆိုးကလေးတွေကို ပေါင်း/မွေးရင်း လူဆိုးအလတ်တွေကို ဖမ်းဆီးအရေးယူရင်း
လူဆိုးအကြီးစားတွေကို ကြောက်နေရတာ မြန်မာပြည် ရဲ ၀န်ထမ်းတွေပါ။
အုပ်ချုပ်သူတွေ မဟုတ်တာလုပ်သမျှ ခေါင်းခံ နာမည်ပျက်ခံရပြီး အထက်ကကြပ် အောက်က ကလန့်တာ ခံနေရတာ မြန်မာပြည် ရဲ ၀န်ထမ်းတွေပါ။
ဘယ်သူမှ ရေတခွက်တောင် အလကားမတိုက်ချင်လောက်အောင် မေတ္တာပျက်ခံနေရရင်း-တချိန်ထဲမှာပဲ အခြားအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျခံနေရတာလဲ မြန်မာပြည် ရဲ ၀န်ထမ်းတွေပါ။
သူတို့ထဲကအများစုက လာဘ်စားတယ်၊ ဂွင်ဆင်ပြီးငွေညှစ်တယ်၊ အဂတိလိုက်စားတယ် ဆိုပါတော့-
မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသလိုလုပ်ဖြစ်အောင် စံနစ်ကြီးက တွန်းပို့ ပုံလောင်းလိုက်တာပါ။
ရဲတွေရဲ့အလုပ်ချိန်ဟာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိဘူး။ လုပ်စရာရှိရင်ရှိသလို ၂၄ နာရီပဲ။
ရဲတွေရဲ့ အလုပ်နေရာဟာလဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိဘူး။ အများစုက လမ်းပေါ်မှာ။
ရဲတွေရဲ့ ခံစားခွင့်ကလဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိဘူး။ အသုံးစားရိတ်အများစုကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာစား ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပစ်ထားတာ။
ရဲစခန်းရဲ့စားရိတ်၊ မီးပြင်တာ ဆေးသုတ်တာ အချုပ်ခန်းပြင်တာ ရဲကားပြင်တာ ဆီထည့်တာ တွေကစလို့ မြို့နယ်မှုးနဲ့စခန်းမှုးရဲ့ စားရိတ်အကုန်လုံးအထိ၊
ရဲစခန်းမှာ ဖုံးတပ်၊ စကားပြောစက်တပ်၊ ကွန်ပျူတာတပ်၊ စီစီတီဗွီတပ်ဘို့အထိ
သူတို့ယူနီဖေါင်းနဲ့ equipment တွေ အကုန်နီးပါးအထိ သူတို့ဘာသာဝယ်ရတာ။
သူတို့မ၀ယ်ရတာ သေနတ်နဲ့ ကျည်ဆံပဲရှိတယ်။ အဲဒါကို မ၀ယ်ရတာလဲ သူတို့မှကိုင်ခွင့် အသုံးပြုခွင့်မရှိပဲ။
သူတို့သုံးရတဲ့ လေးခွတွေ၊ ဒုတ်တွေ၊ လက်ထိပ်တွေ၊ ဒိုင်းတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေ – အဲဒါတွေအားလုံး သူတို့ပိုက်ဆံရှာပြီးဝယ်ရတာ။
ဒီလို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေများလွန်း ဖိစီးလွန်းတဲ့အခါ ရှိသမျှအခွင့်အရေးတွေ မှားမှားယွင်းယွင်းအသုံးချရင်း ကိုယ်တိုင်ပါသာယာလာပြီး ပျက်စီးတော့တာပါ။
မပျက်စီးတဲ့ရဲတွေလဲ အများကြီးပါ။ ကိုယ့်ထက် ခံနိုင်ရည်သာလွန်တဲ့ အဲဒီရဲဝန်ထမ်းကောင်းတွေကို ကျုပ် လေးစားမိပါတယ်။
အခုပြောမိသမျှကတော့ တို့ရုံထိရုံပါပဲ။ ခေါင်းစဉ်လောက်ပဲရှိသေးတာပါ။
ဖတ်မိသူများ ကျုပ်ကို အနီကဒ်ပေးနိုင်ကြပါပြီ။
သူတို့ဘ၀သူတို့အကြောင်း ကျုပ်လိုသိလာတဲ့တနေ့ ကျုပ်ပြောမိတာတွေကို ကျေနပ်သွားမှာပါ။
ဦးဖက်က ရဲတွေနဲ့သိပ်ရင်းတယ်ဆိုတော့ ဘာလဲဗျို့…။ အဆက်အသွယ်လုပ်မိတာ မှားပြီနဲ့တူ၏။ လဝက အရာရှိတယောက် စကားကြုံလို့ ပြောတာနားထောင်ဖူးတယ်။ ရဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ အများသူငှာ အထင်ကြီးတဲ့ အမ်အိုင်အကြောင်း။ အမ်အိုင်ဆိုပြီး သောက်ရမ်း အထင်မကြီးနဲ့တဲ့၊ လမ်းပေါ်လျောက်သွားနေတဲ့ ဒုတပ်ကြပ်လိုထောက်လှမ်းရေး လွယ်အိတ်ထဲမှာ လောက်လေးခွရယ်၊ ညဖက် အရေးကြုံရင် တွေ့ရာရုံးဝင် ဖုံးဆက်လို့ရအောင် ပေးထားတဲ့ မာစတာကီးရယ် ပဲရှိတယ်တဲ့။ ၂၀၀၀ခုနှစ်များလောက်ဆီကပါ။
နယ်မြေအပိုင်စားရတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးများလောက်သာ ကားစီးနိုင်တာ၊ ကျန်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေကတော့ နာမည်ကြီး ထမင်းငတ်။ ရဲကတော့ သူ့ဂွင်နဲ့သူ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ နယ်ထိန်းရဲများဆို ဂွင်ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့။ တခုတော့ ရှိတယ်၊ ဘာလုပ်ငန်းမှ မရှိတဲ့၊ အေးချမ်းနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထိန်းရတဲ့ နယ်ထိန်းများဆိုရင်တော့ ငတ်ပေါ့။ ဦးဖက်ကတော့ အင်တာနက် နယ်ထိန်းရဲလား မသိဘူး။ ခွေးလွှတ်ပါဗျို့ ပြောမှားဆိုမှား ရှိခဲ့ရင်…..။ မလိမ်နဲ့နော်၊ လိမ်ရင်နှစ်ပြစ်….။
ဆာလောင်မှုဒဏ်ကိုဖြေရှင်းဖို့ သေနတ်ထက် ငှက်ပျောသီးက ပိုအသုံးဝင်ပုံရတယ် … ဓါတ်ပုံလေးမြင်ပြီး ရယ်မိတာကလွဲလို့ … တခြားစိတ်တော့မဖြစ်ဘူး … ဟီးဟီး ကိုယ်ချင်းစာလို့ပါ … ။
ကိုယ်တိုင်လည်း .. . ဗိုက်ဆာလျှင် စားဖို့ … ဟိုနားဖွက် ဒီနားဖွက်လုပ်ဖူးတာကိုး
နောက်ဆုံးပေါ် မျက်ရည်ရိုဗုန်း အဲမှားလို့ ဗိုက်ဆာပြေ..။
လက်ထိပ်အိတ်ထဲ လက်ထိပ်မထည့်တော့ပဲ၊ငှက်ပြောသီး ပဲထည့်ထားတာဆို တော့ တိုင်းပြည် မှာလက် ထိပ် ခတ်ရမယ့်အခြေအနေတော်တော်ရှားပါးသွားပြီး၊ လက်ထိပ်ဆောင်ဘို့တောင်မေ့သွားရတဲ့အ နေအထား ရောက် နေပြီ ထင်ပါရဲ့၊ကောင်းလေစွ။ ယူနီဖေါင်းအသစ်၊ဘိနပ်ကအစပြောင်အာင်တိုက်ထားတာ၊အပြင်ထမင်းဆိုင်ဝယ်စား တာဆိုတော့၊ ပိုင်ဆံမရှိ
လို့တော့မဟုတ်တန်ရာ၊ တို့တိုင်းပြည်ကြီး အထာပြောင်းပြီး၊လက်ထိပ်မလိုအောင်ကို ဂတ် မရောက်ခင် အပီ
equipment အဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့ရဲဟာ နယ်ထိန်းမဟုတ်ပါ– ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ရဲလည်းမဟုတ်ပါ— သူတို့ရဲ့အရာရှိကြီးရုံးတံခါးမကြီးကိုစောင့်ပီး ဖွင့်/ပိတ် လုပ်ရတဲ့ ရဲသာဖြစ်ပါတယ်– ဂွင်ကောင်းတဲ့ရဲက equipment အနက်ရောင်ဝတ်ပါတယ်– ဒီလိုရဲမျိုးကို အရင်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရုံးဟောင်း အခု ပတ်စပို့ရုံးအ၀င်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်– တစ်နေကုန်လာသမျှကားတွေကို တံခါးဖွင့်ပေး– လူကြီးကားလာရင် အလေးပြု– ထိုင်တောင် မထိုင်ရပါဘူး– တကယ်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်– ရေဆာရင်လဲ သောက်စရာရေမရှိ– ဗိုက်ဆာ ရင်လဲ ပိုက်ဆံရှိရင်တောင် ထွက်စားလို့မရတဲ့နေရာပါ– ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆာတဲ့အချိန်စားဖို့ ထည့်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်– သနားစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းပါ– တကယ်အဆင်ပြေတဲ့ရဲက အဲလောက်နိမ့်ကျတဲ့အနေအထားမဟုတ်ပါဘူး– မြင်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ရှင်